Injiniya Prototype | Dhizaini & Injiniya Yekusimbisa Kuedza - Createproto - Createproto Tech Co, Ltd.
APPLICATIONS / Injiniya Verification
KuPeopleProto, tinogona kuteedzera uye / kana kuteedzera chero kupedzisa kunogona kugadzirwa mukugadzira, tichisara mukati mehuwandu hwehuwandu. Isu takanyora mashoma eedu anodikanwa ekupedzisa mienzaniso iyo yakanyanya kudzoreredza sarudzo dzawakavhurirwa iwe kune ako ekushandisa.
Shandisa Mainjiniya Prototypes Kuona Kugadzira Kwekugadzira
Simbisa Kutenda Kwako kuburikidza Nekuongorora Kwenharaunda
Sezvo kugadzirwa kwechigadzirwa kuchipinda mumatanho anotevera, zviri kuwedzera kukosha kuitisa zvirongwa zvekuongorora zvechigadzirwa izvo zvinopa mhedzisiro uye ongororo mhedzisiro.
Injiniya uye dhizaini yekuongorora bvunzo yakatarwa bvunzo yechigadzirwa inoitwa pane enjiniya prototypes kana pre-yekugadzira zvikamu. Ivo vanogona kuongorora kana dhizaini inosangana neinotarisirwa chigadzirwa maratidziro uye mashandiro, ayo anosanganisira ekutanga mashandiro ekuyedza, maitiro ekugadzira, mashandiro eparametric zviyero uye Certification zviyero zvechokwadi.
Sezvo chikamu chekusimbisa chinofamba kubva kuinjiniya prototype kuburikidza neinjiniya kusimbiswa (EVT), dhizaini dhizaini (DVT), uye kugadzirwa kwekusimbisa (PVT), chikamu chimwe nechimwe chinotarisa mukugadzirisa dhizaini uye kugadzira. Kuti unyatso simbisa dhizaini yako, nyatsoteerera izvi zvitatu zvakakosha zvezvinhu zvako dhizaini: mashandiro, kugadzirwa uye kugona.
Kuvaka Injiniya Prototypes Kungave Kwako Kugona Solution
Izvo zvinowanzo kuve nehungwaru kufunga nezve yekusimbisa zviyero kana nzira dzekumisikidza dzechigadzirwa chako pakutanga kwekuvandudza maitiro. Kana iyo nguva uye mutengo wekugadzira dhizaini zvave kuwedzera kudzvinyirira, kugadzira yakakwirira-kutendeka mainjiniya prototypes ayo anonyatsomiririra chigadzirwa chekupedzisira, zvinoita kuti zvive nyore kuongorora dhizaini, mainjiniya, uye kugadzirwa, usati waisa mari muzvishandiso zvinodhura uye kuzviisa mukugadzirwa.
Aya mashandiro uye anoshanda chaizvo einjiniya prototypes kana pre-kugadzirwa prototypes anowanzo sanganisira hwakawanda hwezvinhu uye zvinofamba zvemishini zvikamu. Iyo yakakodzera kwazvo uye inoshanda nzira yekugadzira akasiyana masisitimu maererano nemaitiro uye zvishandiso zvichaongororwa kuona kuti iyo yakapedza prototype inonyatso fananidza iyo yekupedzisira-shandisa chigadzirwa. Iyo inokutendera iwe kuti uite kuyedza kwakasimba uye kuongorora usati waendesa dhizaini yako mukugadzira.
Prototyping Partner Yako Injiniya / Dhizaini Verification
Iine anopfuura makore makumi maviri emakore einjiniya uye modhi kugadzira hunyanzvi, GadziraProto inokura mune zvine hunyanzvi mapurojekiti e prototype engineering.
Isu tinogadzira mhinduro yekukurumidza yeprojekti yekusimudzira kuunza chigadzirwa chako kune yekupedzisira bvunzo yekusimbisa chikamu. Tinogona kushandisa yedu yehunyanzvi ruzivo mune yakakwira-chaiyo CNC machining, prototype zambuko tooling uye nekukurumidza jekiseni kuumbwa, inopa yakanakira kuraira pazvinhu zvinoenderana nezvinhu, maitiro, kushivirira, uye kufanotaura zvingangodaro matambudziko ekubatsira kugadzirisa ako einjiniya matambudziko.
Nemainjiniya ehunyanzvi uye mamaneja eprojekti, GadziraProto haina akaenzana mukugadzirwa kwechigadzirwa uye inogara ichichengetedza kubatana pamwe nevatengi, inokwanisa kupa rutsigiro rwunoramba ruripo mukugadzirwa kwechigadzirwa.
3 Kuyedza Mhando dzeMaitiro Ekuongorora
Injiniya Yekusimbisa Miedzo (EVT)
Izvo izvo EVT inovaka inogadzira ndeyeinjiniya prototype neCCC machining, yekutsiva vharuvhu, kana zambuko tooling. Inoda zvigadzirwa zvekugadzira chinangwa uye maitiro ekugadzira pese pazvinogoneka. Asi zvikamu zvekudhinda zve3D hazvigone kuiswa kuEVT.
Kazhinji 20-100 mauniti
Uniti inofanirwa kunge ichishanda zvizere uye ichiedzwa
Shandisa zvakanyanya kushivirira kusangana neyakaedzwa maitiro ekuita
Dhata rekuyedza rinoongororwa kuitira kuona kuti kuita kunodiwa kunowanikwa, bvunzo dzekutanga dzinosanganisira simba, kupisa, uye EMI
Zivhura yakanyanya kukanganisa dhizaini dhizaini uye kurudzira zvingangoitika shanduko yekuvandudza chigadzirwa
Zvakajairika kuita yechipiri EVT kuvaka mushure mekushandurwa kwaitwa.
Dhizaini Yekusimbisa Kuedzwa (DVT)
Iyo DVT inovaka inosanganisira yekupedzisira vhezheni yezvinhu zvese uye dhizaini zvinhu sezvazvinogona. Iyo inosimbisa iyo yekugadzira nzira yezvigadzirwa kuburikidza nekugadzira nzvimbo mune yakaderera-vhoriyamu anomhanya. Kazhinji zvigadzirwa zvekutanga-kugadzirwa zvinogadzirwa kubva nekukurumidza jekiseni kuumbwa kana yakaderera-vhoriyamu yekugadzira uye nekutevera maitiro ekugadzira.
Kazhinji 100-1000 mauniti
Nhengo dzese dzinofanirwa kunge dzichibva kumatombo eforoma kana pre-kugadzirwa maitiro
Ita shuwa kuti zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa maererano nezvizoro uye nharaunda
Iyo chirongwa chekuyedza chakazara, ichifukidza ese mitsara yematanho akakodzera
Inoda kukurumidza kutadza kuongorora uye kugadzirisa zviito
Ongorora chigadzirwa Certification uye zviyero munyika dzakasiyana kana matunhu.
Kugadzira Kugonesa Kwayedza (PVT)
Chikamu chekusimbisa chinogadzirwa ndiyo yekutanga kugadzirwa kumhanya. Iwe unozoisa mutyairi wekugadzira mutyairi kuti utarise kana paine chero kukundikana pane chero nhanho yetambo yekugadzira uye iwe uchaongorora maitiro ekugadzirisa maitiro acho.
Kazhinji 500-2000 mauniti, kana kutopfuura
DFM (Dhizaini YeKugadzira) yaitwa uye maumbwe akagadzirira, hapana shanduko yakaitwa mukushandisa
Kana zvese zvikafamba mushe, zvese zvikamu zvakagadzirirwa kutengeswa kune vatengi
Tarisa uone kugadzirwa kwemazhinji (goho, huwandu, nguva, rework nguva, nezvimwewo)
Yakazara yekumisikidza setup uye yekudzidzira maitiro munzvimbo
Iko kuvimbiswa kwemhando (QA) uye mhando yekudzora (QC) maitiro anofanirwa kuvandudzwa uye kuyedzwa
Parizvino, chikamu chinonakidza kwazvo chechikamu chePVT chakamirira mhinduro kubva kune vashandisi vako vekutanga.
Cnc Rapid Prototyping, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Cnc Kuchengetedza, Kurumidza Prototyping, Kukurumidza Prototyping,